के हो तान्त्रिक यौन ? - Saptakoshionline
प्रकाशित मिति: सोमबार, साउन ०६, २०७६ समय: १२:००:५५
तान्त्रिक यौन, अलि भिन्न लाग्न सक्छ यो सन्दर्भ । वास्तमा यो यौनको कुनै अनौठो गतिविधि भने होइन । यसको लक्ष्य के मात्र हो भने, तपाईंका पार्टनरलाई आध्यात्मिक एवं गहिरो तरिकाले सम्झाउन बाहेक अरु कुनै गतिविधि नहोस् ।
तान्त्रितक यौनका लागि तपाईर्ंलाई छोटो समयले पुग्दैन । यो क्षणिक प्रेमको लागि पनि होइन । ‘यस माध्यामबाट तपाईंभित्र पार्टनरप्रति अगाध श्रद्धा जाग्नुपर्छ’ भनिएको छ तान्त्रिक सेक्स मेड सिम्पलमा । यसको अर्थ के हो भने जब तपाईं आफ्नो पार्टनरसँग यौन सम्बन्ध बनाइरहनुभएको छ, तब तपाईंको मस्तिष्क अन्यत्र भड्किनु हुँदैन । तपाईंको मन-मस्तिष्कमा आफ्नो पार्टनर नै रहनुपर्छ ।
तान्त्रिक यौनको पद्धती, यौनको तौरतरिका र यौनको मानसिक विधीभन्दा पनि उच्च स्तरको हो । तान्त्रिक यौनमा कठिन यौन आसन -मुद्रा)सँग कुनै लेनदेन छैन । यस्तो आसन, जसमा दुबैले उत्तिकै आनन्द लिन सकोस् । यस किमिसको यौन प्रक्रिया लामो समय चल्नुपर्छ र यौनमा पूर्ण आनन्द प्राप्त हुनुपर्छ ।
तान्त्रिक यौन सम्बन्धका लागि आसन, स्थानको कुनै सम्बन्ध छैन । किनभने यो एक मानसिक कुरा हो । यौन सम्बन्धी आफ्नो पुस्तकमा मार्क र प्याटि्रशिया लेख्छन्, ‘कुनै अन्य कारण भन्दा तान्त्रिक यौनको सम्बन्ध तपाईंको दृष्टिकोणसँग सम्बन्धित छ । अतः यसका लागि केवल तपाईंको सोंचमा परिवर्तन आवश्यक छ ।’
-यसका लागि एक खुला, शान्त र एकान्त कोठा आवश्यक छ ।
-कोठा अँध्यारो हुनुपर्छ र त्यसमा मैनबत्ती बालिएको हुनुपर्छ । मैन बत्तीको धिमा प्रकाश चाहिन्छ ।
-ओछ्यानस सहज र फराकिलो हुनुपर्छ । दुबै आरमदायक सिरानीको बीच एककअर्काको नजिक बस्नुपर्छ ।
-एकअर्काको आँखामा गहिरिएर हेर्नुपर्छ, जस्तो तपाईं उनलाई बताउन चाहनुहुन्छ कि तपाईं एक इमान्दार र समर्पित पार्टनर हो ।
-एकअर्काले तालमेल मिलाएर समान गतिमा सास लिनुपर्छ ।
-आफ्नो हात उनको शरीरभन्दा दुई इन्चको दुरीमा राख्नुपर्छ र उनको शरीरबाट निस्किएको उर्जा अनुभव गर्नुपर्छ । यस उर्जा दुबैले क्रमस अनुभव गर्दै जानुपर्छ ।
-दुबैजना भावनात्मक रुपले तयार भएपछि सामान्य विधीबाट यौन क्रियामा संलग्न हुनुपर्छ ।
के हो सेल्फ आइसोलेशन, कसरी बस्ने ?
सेल्फ आइसोलेशनको अर्थ तपाईंले आफूलाई बाहिरी दुनियाबाट अलग राख्ने भन्ने हुन्छ । सेल्फ आइसोलेशनमा रहँदा हावादार कोठामा बस्...
तपाईलाई सेक्स गर्न मन लाग्दैन ? यी हुन् यौन शक्ति बढाउने घरेलु उपाय
तपाईको यौन जीवनमा धेरै समस्याहरु हुन सक्छन् । हामीले समस्याहरु त्यसै लुकाएर बस्नुभन्दा पनि तीनको समाधान खोज्नु पर्छ । नि...
थला परेकी किशोरीलाई बेदान्त हस्पिटलले निःशुल्क उपचार
इटहरी : लामो समय अगाडिबाट बिरामी भएर थला परेकी एक किशोरीको इटहरीमा रहेको बेदान्त हस्पिटलले निःशुल्क उपचार गरेको छ ।इटहरी...
याैन सम्पर्क गर्दा काेराेना भाइरस सर्छ कि सर्दैन ?
काठमाडौँ । चीनको वुहान शहरबाट गत डिसेम्बरमा सुरु भएको कोरोना भाइरस संक्रमण अहिले विश्वब्यापी महामारीको रुपमा तीब्र गतिमा...
यौन मानवीय र जिवित प्राणीको नैसंर्गीक आवश्यकता नै हो । मानिसलाई खानपानको जरुरी भएजस्तै सेक्सको पनि उत्तिकै मात्रामा आवश्...
भारतबाट अवैध रुपमा भित्रिएको माछा नष्ट गर्दै (तस्वीर सहित)
इटहरी / भारतबाट अवैध रुपमा ल्याउदै गरेको ठुलो परिणामको माछा नियन्त्रणमा लिई नष्ट गरेको छ ।भारतबाट नेपाल ल्याउँदै गर्दा स...